HR Executive | Pro Paragon Construction Co., Ltd ﻿
31.1.2019, Full time , Construction / Building
To becomealeading key player in Construction business withatrustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.OUR VALUES
•	Win-Win mindsetPro Paragon Construction
With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.Our Service
•	ကုမ္ပဏီနှင့် ၀န်ထမ်းများအကြားတွင် မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေါင်းကူး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	၀န်ထမ်းများ၏သာရေး၊နာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက် လို စိတ်ရှိရမည်။
•	ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအား ၀င်/ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	HR Diploma (or) Certificate ရရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Internet, Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	စာရင်းဇယားများ စစ်ဆေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
•	HR နှင့်ပတ်သက်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သိရှိနားလည်ရမည်။
We offer •	Female
Work location No.17, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Won Housing, Mayangone Township, Yangon.
Job details Job Category: HR,Training & Recruitment jobs
Company Industry: HR Executive
Job posted: 31/1/2019
Today , Full time , Construction / Building
•	Tender & Project Submission •	Tender Meeting & Clarification •	Electrical Drawing များရေးဆွဲခြင်း။ •	Estimate တွက်ခြင်း။ •	Application Aprroval
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To becomealeading key player in Construction business withatrustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.
OUR VALUES •	Commitment with Dedication •	Honesty •	Innovation •	Win-Win mindset
Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offersarange of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.
Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia withamajor reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.
Job ads in Construction & Property jobs and in Yangon (Rangoon)
•	လုပ်ငန်းခွင်တွင်အာရုံစိုက်ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင်သီလ၀ါ Site တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Civil
•	လုပ်ငန်းခွင်တွင်အာရုံစိုက်ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အင်္ဂလိပ်စကား (ရေး၊ဖတ်၊ပြော)တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Civil
•	Tender များကို ဦးဆောင်တွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အင်္ဂလိပ်စကား(ရေး၊ဖတ်၊ပြော) တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	Tender Meeting များဦးဆောင်တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Building M&E , QS ပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်� ...
•	ကွန်ပြူတာတတ်ကျွမ်းရမည်။ •	အင်္ဂလိပ်စကား (ရေး၊ဖတ်၊ပြော)တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။ •	လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလုံးကို တာ� ...
•	သွက်လက်တက်ကြွပြီး ၀န်ထမ်းအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိပါက Site သို့ သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်တက်ကြွပြီး ၀န်ထမ်းအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်း၊ ဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာပြုစုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေး နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဦးစီးဦးဆောင်� ...
•	Project တစ်ခုလုံး၏ Estimate ကိုရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Project တစ်ခုလုံး၏ Material / Labour / Sub-Contractor တို့၏ Cost Control တာဝန်ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (တွက်ချက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ Approval လက်မှတ်များရယူခြင်း၊ Record ဖိုင်တွဲခြင်း၊ Head Office / PM တို့ဖြင်� ...
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာ များသို့ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်သူ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားလာနို� ...
•	ကုမ္ပဏီနှင့် ၀န်ထမ်းများအကြားတွင် မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကုမ္ပဏီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရ ...
5 Days, Full time , Construction / Building
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	မိမိ Project ၏ Estimate / Schedule များကို တွက်ချက်ရေးဆွဲရန် •	Contractor များ၏ Payment Request များကို စစ်ဆေးရန် နှင့် အတည်ပြုတင်ပြရန် •	Variation Order များကို မှတ်သားရန်၊ တွက်ချက်ရန်၊ တင်ပြရန် •	သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းပမာဏကို ကျော်လွန် သုံး ...
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူ၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ၊ ဖြစ်ရမည်။
•	မိမိတာဝန်ယူရမည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူအားလုံးကို ချမှတ်ထားသည့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လက်တွေ့ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်စေရန် ပညာပေးခြင်း၊ စ ...
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ၊အရက်သေစာမသောက်စားတတ်သူ၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ နေ့ဆိုင်း၊ညဆိုင်း ဆင်းနိုင်ရမည်။
•	သန်မာဖျတ်လတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းခွင်တွင် အာရုံစိုက်ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။
7 Days, Full time , Construction / Building
•	Daily, Weekly, Monthly Report များ ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	(၈)မိုင် ရုံးချုပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
56 Days, Full time , Construction / Building
•	ကား၊ ယန်တရား၊ မီးစကျမြားအကွောငျး နားလညျသိရှိပွီး စဈဆေးကွီးကွပျနိုငျရမညျ။ •	ဌာနဆိုငျရာရုံးမြားအား ၀ငျထှကျသှားလာနိုငျသူဖွဈရမညျ။ •	ရနျကုနျမွို့တှငျး ကြှမျးကငျြစှာသှားလာနိုငျသူဖွဈရမညျ။ •	လို ...
အရကျသစောမသောကျစားတတျသူ၊ စာရိတ်တကောငျးမှနျသူဖွဈရမညျ။ •	Site ထဲတှငျနထေိုငျနိုငျသူဦးစားပေးမညျ။
148 Days, Full time , Construction / Building
• Lead the QS and Drafting Team to make design, proposal, prepare various budgetary and detail estimates for submission to clients • Ensure correct drawings, bills of quantities, standard and specifications are submitted for various RFQ in time • Ensure the project information and all bidding documents are well-organized and kept in control • Lead the QS and Drafting Team to make design, draw project schedules and to select suppliers with reliable prices and putting together to bid foraproject • Support Procurement team during p ...
159 Days, Full time , Construction / Building
167 Days, Full time , Construction / Building
• Tender drawing •	Site investigation and data collection. •	Prepare tender proposal 2D drawings according to client’s requirements and specification in time. •	Coordinate with internal teams (QS/MEP/QAC/SITE), suppliers, clients and local authority. •	Make Structural Analysis and proposed structural details for the proposal drawing. •	Prepare and submit structural calculation, design analysis and structural consideration documents to clients, local authority. • Construction Drawing •	Prepare detailed constr ...
• Tender drawing •	Site investigation and data collection. •	Prepare tender proposal 2D drawings according to client’s requirements and specification in time. •	Coordinate with internal teams (QS/MEP/QAC/SITE), suppliers, clients and local authority. •	Prepare and submit drawings and documents to clients, local authority. • Construction Drawing •	Prepare detailed construction drawing for both RC and steel structure buildings. •	Prepare detailed miscellaneous shop drawing. (E.g. Bar bending detail schedule, Typ ...
•	Attend Tender meeting and organize internal meeting to transfer Tender Documents and information to the team •	Monitor and ensure Tender submissions are in line with bid conditions, tender documents, specifications, requirements and deadlines given by the customers •	Prepare technical & commercial proposals and attend clarification meetings with Client when required •	Able to counter-propose and suggest alternative Value Engineering design, specification and equipment •	Identify important tender requirement, specification an ...
187 Days, Full time , Construction / Building
•	Documentation ပိုင်း ကျွမ်းကျင်ပါက ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။ •	သီလ၀ါ Site တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	Site ၏ Document Control Focal Person အဖြစ် မိမိထံပေးပို့လာသော Drawings / Reports / Records / Instruction / Information တို့ကို လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖြန့်ဝေအကြောင်းကြားရန် •	Site ၏ Report များဖြစ်သော Daily Report / Weekly report / Manpower report / Schedule report / SHE report / QAC report တို့ကို Project Engineer ၏ ညွှန်ကြားခ ...
Duties and Responsibilities •	ကုမ္ပဏီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Maintenance လုပ်ငန်းများကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် •	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment မျ� ...
•	To perform regular site inspection as per set schedule and check the works executed are in accordance with approved specifications, standards and MOS. •	To perform regular QA/QC Audits as per schedule •	To report the abnormal findings and follow up the corrective and preventive actions •	To ensure the tools and equipment are regularly calibrated before their expiration date and support site team with calibration work if necessary •	To ensure the tools and equipment used are verified and support site team with verificat ...
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သီလ၀ါ Site တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အိမ်မှရုံးအတက်၊ အဆင်း ပြု ...
•	စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးစာရင်းသွင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	(၈)မိုင် ရုံးချုပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
392 Days, Full time , Construction / Building
•	ကုမ္ပဏီနှင့် ၀န်ထမ်းများအကြားတွင် မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေါင်းကူး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	၀န်ထမ်းများ၏သာရေး၊နာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက် လို စိတ်ရှိရမည်� ...
401 Days, Full time , Construction / Building
•	ဆိုဒ်မှမှာယူသည့်ပစ္စည်းများအား ဆိုင်များသို့သွားရောက်၍ နေ့စဉ်စစ်ဆေးဝယ်ယူရမည်။ •	၀ယ်ယူပြီးသည့်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့ စနစ်တကျပို့ဆောင်ပေးရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သ� ...
•	Heavy Equipment & Car, Construction Tools, Store လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	၀န်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သီ ...
•	စာရင်း၊ ဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သ ...
•	စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးစာရင်းသွင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	WT/CT/Tax နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Daily,Weekly,Monthly Report များ ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်း� ...
•	စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Daily, Weekly, Monthly Report များအား ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်၊ တိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	၀န်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲန ...
•	ရိုးသားကြိုးစားသူ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအား ၀င်/ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	(၈) မိုင် ရုံးချုပ်တွင်တာ� ...
•	လုပ်ငန်းခွင်တွင် အာရုံစိုက်ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သီလ၀ါ Site တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Civil
498 Days, Full time , Construction / Building
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	နေ့၊ည မရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး 3နှစ် ရှိရမည်။ •	အရက်သေစာမသောက်စားတက်သူ၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျှင် သီလ၀ါ Site တွင်နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ကုမ္ပဏီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Maintenance လုပ်ငန်းများကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် •	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment များ၏ Operation,Maintenance an ...
Job ads in Maintenance Jobs and in Yangon (Rangoon)
•	Store အတွင်းပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းမှု ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ ပြုစုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျှင် သီလ၀ါ Site တွင်နေထိုင်နို ...
•	Take ownership and overall responsibility for all MEP projects and manage them from kick off until handover, in accordance with the contract •	Ensure that all projects are delivered on time, within scope and within budget •	Oversee and manage MEP project team to ensure the works are to be carried out in accordance with the safety rules and quality requirements •	Be the main contact for the main contractors, consultants, suppliers and authorities directly link to the MEP works (Fire department, El, etc) •	Active liaison with cli ...
•	Lead the QS and Drafting Team to make design, proposal, prepare various budgetary and detail estimates for submission to clients •	Ensure correct drawings, bills of quantities, standard and specifications are submitted for various RFQ in time •	Ensure the project information and all bidding documents are well-organized and kept in control •	Lead the QS and Drafting Team to make design, draw project schedules and to select suppliers with reliable prices and putting together to bid foraproject •	Support Procurement team during p ...
•	Make Technical and Commercial research and identify potential customers, customer needs and decision making structure and contacting them via email or phone to establish rapport and set up meetings •	Make Technical and Commercial research to identify the market trend for new business opportunities •	Develop short-term and long term business development strategies to improve company capabilities in identifying and winning new business opportunities •	Take the lead in identifying client needs, specification, proposal submission, con ...
519 Days, Full time , Construction / Building
•	Make Technical and Commercial research and identify potential customers, customer needs and decision making structure and contacting them via email or phone to establish rapport and set up meetings •	Make Technical and Commercial research to identify the market trend for new business opportunities •	Develop short-term and long term business development strategies to improve company capabilities in identifying and winning new business opportunities •	Take the lead in identifying client needs, specification, proposal submission, ...
•	Excavator (21 Ton) မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ •	Compactor (14 Ton) မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ •	Compactor (14 Ton) နှင့် Excavator (21Ton) (2)မျိုးလုံးစလုံး မောင်းနှင်နိုင်သူဦးစားပေးမည်။ •	အရက်သေစာမသောက်စားတတ်သူ၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site ထဲတွင� ...
615 Days, Full time , Construction / Building
•	စာရင်း၊ ဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	Stationary ပစ္စည်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအားဝယ်ယူ မှတ်သားစာရင်းပြုစုနိုင်ရမည်။ •	ကားလမ်းကြောင်းများ စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။ •	� ...
HR Executive HR, Training & Recruitment jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Pro Paragon Construction Co., Ltd HR,Training & Recruitment jobs HR,Training & Recruitment jobs HR Executive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Search best job in Mine Hsat at www.jobless.com.mm. - Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Search best job in Thayarwaddy at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Search best job in Kututmatyi at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Work in Mandalay Region(840)
HR Executive F (3)
Multi World Trade Co.,Ltd
Corporate Zware Group Co.,Ltd
Premium Worldwide Co.,Ltd.
GANDAMAR O.A. & Business Solutions
Yangon (Rangoon) 14 Days
Yangon (Rangoon) 227 Days
Yangon (Rangoon) 261 Days
Yangon (Rangoon) 265 Days
Yangon (Rangoon) 280 Days
Yangon (Rangoon) 281 Days
Yangon (Rangoon) 282 Days
Yangon (Rangoon) 305 Days
Yangon (Rangoon) 374 Days
Yangon (Rangoon) 405 Days
Yangon (Rangoon) 436 Days
Yangon (Rangoon) 499 Days
Yangon (Rangoon) 514 Days
Yangon (Rangoon) 562 Days
Yangon (Rangoon) 593 Days
Yangon (Rangoon) 600 Days
Sales Executive (Taunggyi)
Admin HR assistant
Insurance Executives - Project
HR & Admin Staff